Ny sonian’i Mamy Rakotoarivelo no nahazoan’i Andry Rajoelina ny pilipitra tany New York – MyDago.com aime Madagascar
Ny sonian’i Mamy Rakotoarivelo no nahazoan’i Andry Rajoelina ny pilipitra tany New York
Tamin’ny fandraisam-pitenenan’I Guy Maxime tetsy amin’ny Magro no nilazany fa tsy nahazo niteny tany New York I Andry Rajoelina raha tsy nanao sonia i Mamy Rakotoarivelo sy Emmanuel Rakotovahiny. Aoka koa ho fantatra fa tao aorian’i Tanzanie sy Comores i Andry Rajoelina vao nandray fitenenana, manamafy ny tenin’ny hafa i Ban Ki Moon ny tokony hampiharana amin’ny antsimpirihany ny tondrozotra, miankina amin’io ny fankatoavana iraisam-pirenena. Dingana voalohany iny Paon d’Or iny fa ny “conférence au sommet “ no handinihana ny zavatra rehetra hoy ity filohan’ny AMM ity.Tsy i Richard na Christine no tsy hampody an-dRavalomanana hoy izy, tsy ireo olona ireo no hanimba ny hoavin’ i Madagasikara. Ilaina io satria ny fampihaonana ireo nihavin’ny disadisa ihany no hitondra ny vahaolana koa dia hampangino ny olonao ry Rajoelina hoy Guy Maxime.
I Mektoub kosa dia nanambara fa nalaza tampoka i Andry Rajoelina tany New York ary niteraka resabe eran’ ny tanana. Na tanyNew York aza ianao , tsy milaza izany fa manaiky anao ny be kintana, samihafa ireo hoy izy. Na Sarkozy rainao aza tsy nanaraka ny lahateninao. Mba asehoy anay ilay vidéo nisy ireo lahateny fa aza koboninareo anareo irery satria anareo ny haino aman-jery ka izay tenenireo ihany no marina. Mbola nisy ireo filoha Afrikana nanontany hoe « quel est son statut ? ». Monde arabe de l’extrême orient, sécurité et environnemnt no resaka tany fa tsy fifidianana fa ara-pomba diplomatika dia rehefa tapitra ny lahaten’ny adala dia mitehaka ihany. Iny no tompony ary fanaovana veloma.
Misy milaza eto an-toerana fa manakaiky ny fankatoavana iraisam-pirenena tahaka ny tamin’ny 2002. Tsia, na miova aza ny mpitondra amin’ny tany mandroso sy goavana, ny politikany tsy miova ary ny be kintana no tompony eran-tany. Samy miandry ny fampiharana ny fianakaviam-be iraisam-pirenena isika.Aoka hazava, hoy Mektoub, fa tsy faharesena ireny, mitohy ny tantara ary ny tondrozotra dia milaza fa miafara amin’ny sommet ny farany.
A New York: Rajoelina se prend pour un héros…
« Tsy nahazo niteny indray i Andry Rajoelina tany Turquie hoy i Manoela »-09 mey 11
Auteur Solo Razafy*Publié le 26 septembre 2011 26 septembre 2011 Catégories Politique
Précédent Article précédent : Entre espoir et interprétations calomnieuses
Suivant Article suivant : Mankasitraka ny fahanginan’ny miaramila hoy Rostant